ဆုတ်ယုတ်လာသော ဂျာမနီ - အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး - Yangon Media Group
ဆုတ်ယုတ်လာသော ဂျာမနီ – အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ယခုတလောမှာ အလျင်အမြန်ဆုတ်ယုတ်လာတာ တွေ့မြင်နေရတယ်။ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ် ဆက်ဆံ ရေးပုံရိပ်ကိုပါ ထိခိုက်လာခဲ့ရတယ်။ ယခုလို သဘောထားကွဲလွဲမှုဟာ ကမ္ဘာ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာ နှစ်နိုင်ငံရဲ့ အမြင်ချင်းမတူတာက စခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
ဒီမဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းက ဂျာမနီရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ပိတ်ပင်ဖို့ ကြိုးစားလာကတည်းက စခဲ့တာအမှန်အကန် ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခါနီး နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဟာရီမော်ဂန်သာက ဂျာမနီကို စက်မှုနိုင်ငံဘဝကနေ စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်တာကလည်း ဂျာမနီကို စက်မှုထွန်းကားပြီး စစ်အင်အားပြန်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်လို့ဖြစ်တယ်။
မော်ဂန်သာရဲ့စီမံကိန်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်လို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ အဓိကအချက်က အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်ယူနီယံတို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြောင့် ထူး ခြားတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ ဂျော့ကင်နန်က အင်အားကြီးတဲ့ ဂျာမနီကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တယ်။ သံကန့်လန့်ကာနဲ့ခြားထားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလင်ကို အရှေ့အနောက်ခွဲပြီး အရှေ့ဂျာမနီနဲ့ အနောက်ဂျာမနီကွဲသွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုက ဂျာမနီနဲ့ အနောက်ဥရောပကို သူ့ရဲ့ သစ္စာခံလာအောင် မာရှယ်စီမံကိန်းနဲ့ စီးပွား ရေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တယ်။ မာရှယ်စီမံကိန်းရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ဂျာမနီဟာ စက်မှုထွန်းကား တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။
ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ၁၉၅ဝ ပြည့်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါ အမေရိကန်ဟာ ဂျာမနီ စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ကို အ ထောက်အပံ့ပေးပြီး စစ်လက်နက်တွေကို ထုတ်လုပ်စေခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က ဂျာမန်ပြည်ထောင်စုကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် မေလမှာ မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့ (NATO)ကိုဖွဲ့တဲ့အခါ ဂျာမနီဟာ နေတိုးရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာ ဂျာမနီဟာ သူ့ရဲ့အင်အားကို အကန့်အသတ်နဲ့ ထူထောင်ပြီး အနောက်အုပ်စုနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဂျာမနီဟာ အတ္တလန္တိတ်ထီးရိပ်အောက်မှာနေထိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ပို့ကုန်အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့လို့ ကုန်သွယ်ရေးအဓိကဝါဒ ဖြစ်လာတယ်။ ဂျာမနီစီးပွားရေးကို သေးငယ်အောင်လုပ် ပေမယ့် ဂျာမနီဟာ စီးပွားရေးအင်အား ကြီးထွားလာခဲ့တယ်။
အမေရိကန်ဟာ ဥရောပရဲ့ ပထဝီနိုင်ငံ ရေးမှာ အောင်နိုင်ခဲ့ပြီ့းျှွှ ခေါ်တဲ့ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခဲ့ပြီးနောက်မှာ နေတိုး အဖွဲ့ကို ပြည်လည်ပုံဖော်ခဲ့တယ်။ ဂျာမနီရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အာဏာဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခု ဖြစ်စဉ်မှာ အနေအထားချပေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ဟာ သံကန့်လန့်ကာအား အရှေ့ ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုကို ဘောလတစ်နိုင်ငံ တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ပိုလန်နိုင်ငံကို ဝါဆောစာချုပ်ပြိုကွဲပြီးနောက် နေတိုးအဖွဲ့ထဲကို ဝင်စေခဲ့ပြီး ယူကရိန်းကိုလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ ဆွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးနောက် ဆိုဗီယက်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကို နေတိုးအဖွဲ့သို့ မဝင်ရောက်မီ ကနဦးမှာ အီးယူအဖွဲ့(ခေါ်) ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ထဲကို ဝင်စေခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတချို့က အီးယူအဖွဲ့ကို ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကန်က ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲတာဟာ အီးယူအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လို့ခံယူထားတယ်။ နေတိုးအဖွဲ့တပ်တွေကို ရုရှားနယ်စပ်အနီး ရောက်အောင် သေသေသပ်သပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကာလမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဂျာ မနီတို့ဟာ အကျိုးစီးပွားချင်း ပဋိပက္ခမဖြစ်ကြသေး ဘူး။ အရှေ့အနောက်ပြန်ပေါင်းခဲ့တဲ့ ဂျာမနီကို လည်း နေတိုးမဟာမိတ်မှာ ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ဂျာမနီဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံက ကွဲထွက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကို အီးယူအဖွဲ့ထဲကို ဝင်ခွင့်ပေးပြီး အဲဒီနိုင်ငံတွေက ဈေးပေါတဲ့အ လုပ်သမားတွေ၊ သယံဇာတတွေနဲ့ ဂျာမနီကို ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကို ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဂျာမန်လေ့လာရေးဆိုပြီး လုပ် ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဂျာမနီဟာ အရှေ့ဥ ရောပနိုင်ငံတွေကို သူ့ရဲ့ပထဝီစီးပွားရေးနယ် ပယ်ထဲကို သွတ်သွင်းခဲ့တယ်။ ဂျာမနီဟာ ယူရိုငွေကြေးကိုထူထောင်ပြီး ယူရိုဇုန်နဲ့ ဥရောပစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ လုပ် ဆောင်ခဲ့တယ်။ အလုပ်သမားခကြီးမြင့်မှုကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ဂျာမနီထုတ်ကုန်တွေကို ပထဝီအရ နယ် မြေခြားဒေသတွေကိုပို့နိုင်အောင် နိုင်ငံရေးဦး စားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဝင်ရိုးစွန်းများစွာပေါ်ထွက် ချိန်မှာ အမေရိကန်ဟာ အာဏာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အမေရိကန် အာဏာကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ ဂျာမနီကတော့ အရှေ့ဥရောပနဲ့ဆက်ဆံရေးကို မူလကတည်းက လုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်မှာ ဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ် လာတဲ့အခါ ဥရောပရဲ့အနေအထားကို ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရရင် ထရန့်ဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကို ကျင့်သုံးလာလို့ဖြစ်တယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ မဟာမိတ်တွေကြားမှာ ကုန်သွယ် ရေးလိုငွေပြနေမှုကို လျှော့ချလိုတဲ့သဘော ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ထရန့်ဟာ ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ မော် တော်ကားတွေ၊ စတီးနဲ့အလူမီနီယံကုန်ပစ္စည်း တွေအပေါ်မှာ သွင်းကုန်ခွန်တိုးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဟာ ဂျာမနီကိုများစွာထိခိုက်စေခဲ့ရတယ်။ ဂျာမနီ စီးပွားရေးမှာ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ အမေရိကန်ဟာ ဂျာမနီနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးနေတဲ့ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံ တွေကို သိမ်းသွင်းခဲ့တယ်။ ဂျာမနီ-ရုရှားစွမ်း အင်ဆက်ဆံရေး မဟာမိတ်ခိုင်မြဲမှုကို ပယ်ဖျက် စေဖို့ဖြစ်တယ်။ ရုရှားမှ အနောက်ဥရောပသို့ ဂက်စ်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းမှုဟာ ပထဝီနိုင်ငံရေး နဲ့သက်ဆိုင်နေလို့ အမေရိကန်က မလိုလားဘူး။ ရုရှားဟာ ဥရောပရဲ့ အဓိကစွမ်းအင်ပံ့ပိုးသူအ ဖြစ်ရောက်လာမှာကိုလည်း အမေရိကန်ကစိုး ရိမ်တယ်။ ဂျာမနီရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ မူလဥရောပ နိုင်ငံဟောင်းတွေကိုထိန်းထားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်ကိုလည်း အမေရိကန်က ကဖျက်၊ ယဖျက်လုပ်နေတယ်။
ထရန့်က အီရန်နျူကလီးယားစာချုပ်ကထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဟာ ဂျာမနီနဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။ ဒီ ဖြစ်ရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာခုခံဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်း ဒါစပီဂယ်က ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်ရမယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ဂျာမနီဟာ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး နေတိုး အဖွဲ့ကလွတ်ကင်းတဲ့ ဥရောပရဲ့ ပူးတွဲကာကွယ် ရေးတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသွားရမယ်လို့ အကြံပြု ကြတယ်။ ဥရောပကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖို့ အီးယူအဖွဲ့မှာ ကာလရှည်ကြာကတည်းက ဆွေး နွေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်-ဂျာမန်ဆက်ဆံ ရေး ပိုပြီးယိုယွင်းလာကာ အမေရိကန်ရဲ့သြဇာဟာ ဥရောပမှာ ညောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ ဘူးလို့ သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ။
G-Times, Reuters, AP
တာချီလိတ်မြို့ ပြည်တော်သာဈေး၌ ရေခဲသေတ္တာ အပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်
အမေရိကန် - တောင်ကိုရီးယား ပြုလုပ်နေကျ သြဂုတ်လ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ရပ်ဆိုင်းမည်
မြန်မာ-ထိုင်း မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ အကြိမ် (၄ဝ)မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ၊ နှစ်နိုင်ငံ ပ?
အလယ်အလတ် ဝင်ငွေရှိသူများကို ဝင်ငွေခွန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထရန့် လျှော့ပေးမည်
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် မဟာသီယာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်ချမှတ်
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုအခက်အခဲများကြောင့် လေးလတာအတွင်း မူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း?
အစိုးရသစ်လက်ထက် သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း လက်ယက်တွင်းများမှ ရေနံသယ်ယူခွင့် မျှောစာထုတ်ပေးရာမှ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ငွေကျပ်ဘီလီယံ ၂၀ ဝန်းကျင်ရရှိ